Missfresh သည် တရုတ်၏ ထိပ်တန်း ကုန်စုံဆိုင် လက်လီ အရောင်းဆိုင် ဖြစ်ပြီး တရားစီရင် ပိုင် ခွင့်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည် - Pandaily
Missfresh သည် တရုတ်၏ ထိပ်တန်း ကုန်စုံဆိုင် လက်လီ အရောင်းဆိုင် ဖြစ်ပြီး တရားစီရင် ပိုင် ခွင့်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည်
May 31, 2022, 12:41ညနေ 2022/05/31 14:07:30 Pandaily
China Executive Information Open ဝက်ဘ်ဆိုက် အရMissfresh သည် ဒေသဆိုင်ရာ ဦး ဆောင် လတ်ဆတ်သော ကုန်စုံဆိုင် ပလက်ဖောင်း ကို တရားစီရင် သူ အဖြစ်သတ်မှတ် သည်ပေကျင်း Chaoyang ခရိုင် ပြည်သူ့ တရားရုံးက ယွမ် ၅. ၃ ၂၉ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉ ၉၃ ၂၅) ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင် ရသည်။ ဒါဟာ Missfresh ကို ဒီ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
MissFresh ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း များ ကျဆင်း နေသည်။ မေလ ၂၇ ရက် ကုန် ခါနီး တွင် MissFresh ၏ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင်ဒေါ်လာ ၀. ၁၅၇ ဖြစ်ပြီး အဖွင့် ဒေါ်လာ ၁၃. ၀ နှင့်သိသိသာသာ ခြားနား သည်။ သို့သော် Missfresh နှင့်နီးစပ် သူတစ် ဦး က ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မကြာမီ ကာလတွင် စတော့ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း များကို ကယ်တင် ရန် အရေးယူ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အွန်လိုင်း လတ်ဆတ်သော ကုန် စုံ လက်လီ ရောင်းချ သူများသည် အရင်းအနှီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု၏ အကူအညီဖြင့် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား လာသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် Missfresh သည် ပထမဆုံး အွန်လိုင်း လတ်ဆတ်သော ကုန်စုံဆိုင် လက်လီ အရောင်းဆိုင် ဖြစ်လာ ခဲ့သည်၊ သို့သော် စာရင်း ၏ပထမ နေ့တွင် ပျက်ကျ ခဲ့သည်။ ထိုအချိန် မှစ ။ ၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာ စျေးနှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ ယခုနှစ် April ပြီလ တွင်၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ၁. ၀ ဒေါ်လာ အောက် သို့ ကျဆင်းသွားပြီး ဖျက်သိမ်း မည့် အန္တရာယ် နှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန် မှစ ။ Missfresh သည် Nasdaq Listing Qualification Department မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် ဘဏ္ year ာရေး နှစ်အတွက် ၂၀၂၁ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကို အချိန်မီ ထုတ်ဖော် ရန်ပျက်ကွက် ခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် Nasdaq စာရင်း စံချိန်စံညွှန်း များ နှင့်မကိုက်ညီ ကြောင်း သတိပေး စာတစ်စောင် ရရှိခဲ့သည်။
Missfresh က ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ပြန်လည်သုံးသပ် မှု ပြီးဆုံး ရန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်း သွားမည်ဖြစ်ပြီး Securities and Exchange Commission သို့ အမြန်ဆုံး တင်ပြ သွားမည်ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ အထက်ပါ သတင်းရပ်ကွက် များအရ Missfresh သည် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း ပြီး အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော် တော့ မည်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Missfresh သည် Bytedouth နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုန်စုံဆိုင် များ ကိုတိုက်ရိုက် ရောင်းချ သည်
Missfresh သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၃. ၇ ၃၇ ဘီလီယံမှ ၃. ၇ ၆၇ ဘီလီယံ ကြား အရှုံးပေါ် မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဤ ဆုံးရှုံးမှု သည်၎င်း၏ ဆုံးရှုံးမှု စံချိန် ကိုထပ်မံ ချိုးဖျက် လိမ့်မည်။ ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၀ အထိ ကုမ္ပဏီ သည်ယွမ် ၂. ၂ ၉၈ ဘီလီယံ၊ ယွမ် ၃. ၀ ၉၆ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၁. ၆ ၅၆ ဘီလီယံ အသီးသီး အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။
Tags delist | financial loss | fresh grocery | missfresh
Missfresh သည် Bytedouth နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုန်စုံဆိုင် များ ကိုတိုက်ရိုက် ရောင်းချ သည်
တရုတ် နိုင်ငံမှ လတ်ဆတ်သော ကုန်စုံဆိုင် e-commerce လက်လီ အရောင်းဆိုင် Missfresh သည် Ocean Engine နှင့် မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက် အဖြစ် ပူးပေါင်း ခဲ့ပြီး TikTok ၏ ပြည်မ ကြီး၏ အစ်မ အက် ပလီကေးရှင်း Douyin တွင် လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ ခဲ့သည်ဟု ကြာသပတေး နေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Jan 28 ဇန်နဝါရီ 28, 2022
Missfresh Nasdaq နိမ့်ဆုံး လေလံ စျေးနှုန်း အကြောင်းကြားစာ ကိုလက်ခံရရှိ ခဲ့သည်
Missfresh သည် Nasdaq မှ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် အသိပေး ချက် ရရှိခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ADS သည် Nasdaq စာရင်း စည်းမျဉ်း များအရ ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁. ၀၀ ထက်နိမ့် ကျပြီး ပထမ ရက် ၃၀ အတွင်း ပိတ် ခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
တရုတ္အစားအစာ ကုန္စံုဆိုင္တာေတြကို MissFresh က သိုသိုသိပ္သိပ္ တင္သြင္းၿပီး အရင္ကလည္း
China Electricity ကုန္စံုဆိုင္ Platform မွ MissFresh သည္ မၾကာေသးမီက သိုသိုသိုသိပ္သိပ္ သိုသိပ္သိပ္ သိုသိပ္သိပ္ သိုသိုသိပ္သိပ္သိပ္ ရွယ္ ရွယ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္တြင္ စာရင္း၀င္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ သန္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ လ်ာထားသည္။